Nin ka hawlgala arrimaha dibadda oo fiisooyin qaldan bixiyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nin ka hawlgala arrimaha dibadda oo fiisooyin qaldan bixiyey
La daabacay onsdag 21 december 2016 kl 10.30
Nin fiisooyin sharci darro ah bixiyey
Fiisooyin si qaldan lagu bixiyey.
Nin shaqaale u ah wasaaradda arrimaha dibadda dalkaan Iswiidhan kana hawlgala safaarad mid ka mid safaaradaha dalkaani ku leeyahay dalalka dibadda ayaa loo maleynayaa in uu si xirfadeysan u soo galiyey dad soo galooti ah dalkaan Iswiidhan, sidaasna waxaa lagu sheegey baaritaan ay soo gudbisey hey’adda socdaalka dalkaan Iswiidhan.
Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa intii muddo sanad ah waxay ka warqabtey mushkiladdaan fiisooyinka la xiriirta balse sidaas oo ay tahay waxba kama aysan qaban, wax baaritaan ahna arrinkaas kuma sameyn.
Qof horey uga mid ahaa shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda , kana hawlgali jirey safaarad ka mid ah safaaradaha dalkaani ku leeyahay qaaradda Aasiya, ayaa lagu tuhunsan yahay in uu si ula kac ah fiisooyinka Iswiidhan u siiyey dad, isagoo raacaya hab qaldan.
Dadkaan oo fiisooyinkaas la siiyey sanadkii 2015-kii ayaa dhan ilaa iyo todobaataneeyo qof oo u dhalatey dalka Afqaanistaan, sida lagu sheegey baaritaanka ay soo bandhigtey hey’adda socdaalku.
Qaar ka mid ah dadkii fiisooyinkaas sida qaldan lagu soo siiyey ayaa waxay qaxooti ahaan isaga dhiibeen dalkaan Iswiidhan ka dib markii ay fiisooyinkaas ku soo galeen.
Magnus Rodin oo ah madaxa hey’adda socdaalka waaxdeeda Stockholm ayaa isagoo arrinkaas ka hadlaya waxaa uu yiri :
Arrintaani aad iyo aad ayey khatar u tahay, mar kasta oo qofka shaqaalaha ahi sharciga jabiyo uuna si sharci darro ah ugu ogolaado wax aan sharcigu qabin ,waa mid khatarteeda leh, ayuu yiri Magnus Rodin oo ah madaxa hey’adda socdaalka waaxdeeda Stockholm.
Waaxda wararka Idaacadda Iswiidhan ee Ekot ayaa markii ay arrinkaas wax ka weydiisey Sofia Karlberg oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dinbadda dalkaan Iswiidhan, ayaa markii hore inkirtey in gabi ahaanba ay u warhayaan arrimahaas ay hey’adda socdaalku soo bandhigtey, waxayna tiri iyadoo arrinkaas ka hadleysa:
Wararkii aan ka helney waaxda shaqaalaha ee wasaaradayada sanadkii 2014-kii wuxuu la xiriirey arrimo shaqada safaaradda ku saabsan, wararka wax isdabamarinta la xiriirase waxaan helney xilligii gugga ee sanadkaan 2016-ka , ayey tiri Sofia Karlberg oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dinbadda dalkaan Iswiidhan.
Laakiin waaxda wararka idaacadda Iswiidhan ee Ekot ayaa ila wareed oo kala duwani waxay u sheegeen in dhibaatooyinka la xiriira arrimaha shaqada ee ay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibaddu ka hadleyso ay dhabtii ku saabsanaayeen fiisooyinkaas sida qaldan loo bixiyey.
Ninka falkaan fiisooyinka in uu ku kacey lagu eedeynayo, ayaa sheegey in uusan wax danbi ah galin.
Qareenka ninkaas, Jan Södergren ayaa sheegey in eedeymahasi yihiin kuwa aan sal laheyn, ayna yihiin wax laga xumaado.